ZigBee 3.0: Aasaaska Internetka Waxyaabaha: La Bilaabay oo Loo Furay Shahaadooyinka | Teknolojiyada Owon
ZigBee 3.0: Aasaaska Internetka Waxyaabaha: La Bilaabay oo Loo Furay Shahaadooyinka
(Xusuusin Tifatiraha: Maqaalkani, waxaa laga tarjumay ZigBee Tusmada Tilmaamaha · 2016-2017 Edition.)
Zigbee 3.0 waa mideynta heerarka wireless-ka ee hogaaminaya isbahaysiga xulafada iyadoo loo marayo hal xalka dhamaan suuqyada tooska ah iyo qalabka. Xalku wuxuu siiyaa wada shaqeyn aan kala go 'lahayn oo ka dhexjirta aaladaha kala duwan ee casriga ah waxayna siinaysaa macaamiisha iyo ganacsiyada inay helaan alaabooyin iyo adeegyo casri ah oo ka wada shaqeeya kor u qaadista nolol maalmeedka.
Xalka ZigBee 3.0 waxaa loogu talagalay inuu ahaado mid si fudud loo dhaqan gelin karo, wax loo iibsan karo loona isticmaali karo. Nidaam deegaan oo keliya oo si buuxda u wada hawlgala ayaa daboolaya dhammaan suuqyada tooska ah iyaga oo tirtiraya baahida loo qabo in la kala doorto astaamaha u gaarka ah dalabka sida: Aaladda otomaatiga ah, Iskuxirka Nuurka, Dhismaha, Tafaariiqda, Smart Energy iyo Caafimaadka Dhammaan aaladaha PRO ee dhaxalka iyo kooxaha waxaa lagu fulin doonaa xalka 3.0. U hoggaansanaanta horay iyo gadaal u leh qaab-dhismeedka dhaxalka leh ee PRO.
Zigbee 3.0 wuxuu adeegsadaa qeexitaanka IEEE 802.15.4 2011 MAC / Phy ee ka shaqeynaya 2.4 GHz oo aan sharciyeysneyn oo keenaya helitaanka suuqyada adduunka oo dhan oo leh heer cabbirka raadiyaha iyo taageerada tobannaan shirkado wax soo saara. Waxaa lagu dhisay PRO 2015, dib-u-eegista kow iyo labaatanaad ee warshadaha hogaaminaya heerka isku-xirnaanta mesh ZigBee PRO, ZigBee 3.0 waxay ka faa'iideysataa in ka badan toban sano guushii suuqa ee lakabkan isku xirnaanta ee taageeray in ka badan hal bilyan oo qalab oo la iibiyay. Zigbee 3.0 wuxuu keensadaa habab nabadgelyo shabakadeed oo cusub si uu suuq ugula socdo baahiyaha weligood isbadalaya ee muuqaalka amniga IoT. Shabakadaha Zigbee 3.0 sidoo kale waxay bixiyaan taageero loogu talagalay Zigbee Greeen Power, goosashada tamarta "batteri-yar" dhamaadka-node iyadoo la siinayo hawl wadeen isku mid ah.
Isbahaysiga Zigbee wuxuu had iyo jeer aaminsan yahay in wada shaqeynta dhabta ahi ay ka timaaddo jaangooyooyinka dhammaan heerarka shabakadda, gaar ahaan heerka dalabka ee sida aadka ah u taabanaya isticmaalaha. Wax kasta oo ka mid noqoshada shabakad illaa howlaha aaladda sida dabka iyo dibedda ayaa loo qeexaa si aaladaha ka imanaya iibiyeyaasha kala duwan ay si wada jir ah ugu shaqeyn karaan si dhib yar Zigbee 3.0 wuxuu qeexayaa in ka badan aaladaha 130 oo leh noocyada ugu ballaaran ee noocyada qalabka oo ay ku jiraan aaladaha loogu talagalay: otomatiga guriga, laydhka, maaraynta tamarta, qalabka casriga ah, amniga, dareeraha, iyo alaabada kormeerka daryeelka caafimaadka. Waxay taageertaa rakibidda DIY-ka ee si fudud loo isticmaali karo iyo sidoo kale nidaamyo si xirfadaysan loo rakibay.
Ma jeclaan lahayd inaad hesho xalka Zigbee 3.0? Waxay waxtar u leedahay xubnaha Isbahaysiga Zigbee, haddaba ku soo biir Isbahaysiga maanta oo ka mid noqo nidaamkeena deegaanka adduunka.
Waxaa qoray Mark Walters, CP ee Horumarinta Istiraatiijiyadeed · Isbahaysiga ZigBee